Home » Vaovao Karaiba » Sandals Beach and Resorts: Mamandriha am-pitokisana
Sandals Beaches and Resorts dia faly amin'ny manohy manao dia lavitra sy tsy misy fihenjanana araka izay azo atao ho an'ny vahiny miaraka amin'ny fanitarana ny drafitry ny fiarovana ny fanafoanana sy ny fiarovana ny dia - Tonga eto amintsika ny fiantohana hatramin'ny 28 Febroary 2021, sady manome COVID-19 fanampiny koa. fanandramana amin'ireo vahiny voasoratra anarana eny amin'ny toeram-pialofana alohan'ny hiaingany. Miaraka amin'ireo tombam-bidy fanampiny ireo, ny orinasan-tsarimihetsika Luxury Included® dia manome antony bebe kokoa ho an'ny mpanjifa Mametraha amin-toky.
"Hanohy hiezaka mafy izahay mba hahazoana antoka fa hanana fiadanan-tsaina ny vahininay rehefa hanao fialan-tsasatra hiaraka aminay amin'ny Sandals and Beaches Resorts," hoy i Adam Stewart, Filohan'ny Executive an'ny Sandals Resorts International.
Drafitra fiarovana ny dia - Tonga eto amintsika ny fiantohana
Mba hanolorana fiarovana bebe kokoa ho an'ny vahiny, ny Sandals® sy ny Beaches® Resorts dia nanitatra ny drafitry ny fiarovana azy ireo - Ny fiantohana dia ampiasain'ny Trip Mate ™ izay novidiana tamin'ny anaran'ny vahiny. Ny drafitra dia manolotra ireo mpandeha manao famandrihana ankehitriny hatramin'ny 28 Febroary 2021, ho an'ny dia izao hatramin'ny 31 Aogositra 2021, nanitatra ireo tombontsoa ara-pahasalamana nandritra ny fijanonan'izy ireo. Miaraka amin'ny Planin'ny Fiarovana amin'ny dia, ny vahiny dia takiana amin'ny fanitarana ny fijanonany any amin'ny quarantine ary mba hahazoany fitsaboana ilaina mandritra ny 14 alina nefa tsy andoavany vola. Ny tombony fanampiny amin'ny drafitra dia ny fandrakofana ny fandaniana ara-pahasalamana sy ny tombony farany hatramin'ny $ 100,000 isaky ny vahiny.
Manomboka izao ka hatramin'ny 28 Febroary 2021, ny vahiny manofa Vacation Luxury Included® ho an'ny dia izao hatramin'ny 31 aogositra 2021, dia hanana tombony fanampiny amin'ny fahafantarana fa afaka manafoana ny fialan-tsasatra farafaharatsiny 31 andro alohan'ny hahatongavany izy ireo ary mahazo valiny feno amin'ny ampahany amin'ny fialan-tsasatr'izy ireo miaraka amin'ny sazy sanda. Ireo vahiny manafoana 30-15 andro alohan'ny fahatongavany dia hahazo tamberina famerenam-bola 50 isan-jato sy taratasy fanamarinana momba ny dia 50 isan-jato amin'ny dia ho avy any amin'ny Sandals na Beaches Resort ao anatin'ny 12 volana. Ny mpitsangatsangana koa dia manana safidy hanafoana ao anatin'ny 14 andro ary hatramin'ny andro nahatongavany ho mari-pankasitrahana momba ny dia 12 volana hatramin'ny datin'ny dia voalohany.
* Ity tombony ity dia nomen'ny Unique Vacations Inc. fa tsy tombony fiantohana.
Fitsapana COVID-19 fanampiny
Ny Sandal sy ny Beach Resorts dia manao izay rehetra azo atao mba hanomezana traikefa azo antoka, tsy misy filaminana ary tsy misy fihenjanana mba hahafahan'ny vahiny manohy mamandrika ny fialan-tsasatra Luxury Included® amin'ny fahatokisana tanteraka. Ny Centers for Disease Control (CDC) dia nanambara vao haingana ny fepetra takiana amin'ireo mpitsangatsangana iraisampirenena hanehoana fitsapana COVID-19 ratsy alohan'ny hiverenan'izy ireo any Etazonia, Kanada ary UK. Manoloana ireo fepetra takiana ireo, ny vahinin'ny Sandals sy Beaches Resorts rehetra dia hahazo fanandramana antigen COVID-19 maimaimpoana ho an'ny mponina amerikana sy fanandramana PCR ho an'ny mponina kanadiana sy anglisy avy hatrany amin'ny fampiononana ao amin'ilay toeram-pivarotana. Ny fitsapana rehetra dia hatao amin'ny alàlan'ny matihanina ara-pitsaboana ankasitrahana miaraka amin'ny fahafaham-pon'ny vahiny ambony indrindra ary ny fanelingelenana kely ny fianaran'izy ireo amin'ny fialan-tsasatra ankapobeny. Raha misy fitsapana tsara ho an'ny mpitsidika ny COVID-19 alohan'ny hiaingany, dia omanina feno ny toeram-pialantsasatra miaraka amin'ny tobin'ny mpitsabo manana mpiambina voasoratra anarana sy mpitsabo 24/7 hiantsoana azy ireo.
Ny tombontsoa ho an'ny fiarovana amin'ny fanafoanana, ny drafitra fiarovana amin'ny dia ary ny fitsapana COVID-19 fanampiny, miaraka amin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana ary Protocole momba ny fahadiovana ny Platinum, mamela ny mpandeha hitsoaka any Karaiba miaraka amin'ny fahatokisana nantenain'izy ireo.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba famandrihana sy fitsangatsanganana amin-toky, tsidiho:
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny drafitra fiarovana amin'ny dia - Tonga ny fiantohana, fitsidihana: